Filtrer les éléments par date : samedi, 22 février 2020
Lavo teo amin’ny lalao famaranana ireo solontena malagasy teo amin’ny sokajy lehilahy sy vehivavy tamin’ny andiany faha-26 amin’ny fiadiana ny tompondakan’ny faritra faha-7 isan-tarika natao androany.
Teo amin’ny sokajy lehilahy dia resin’ny Tampon Gecko Volley avy atsy La Réunion tamin’ny seta 3 noho 2 ny ekipan’ny Zandarimariam-pirenena na GNVB Madagascar teo amin’ny famaranana.
Teo amin’ny sokajy vehivavy indray dia voahosotra ho tompon-daka ny Quatre Borne avy atsy Maorisy rehefa nanamontsana ny Stef'Auto Madagascar tamin’ny seta 3 noho 0.
Kaominina miisa 58 ao amin’ny Faritra Androy no isany ianjadian’ny haintany tato anatin’ny efa-bolana teo, izay nampihantona ny orana.
Tonga tany Androy ny delegasiona tarihin’ny filoham-pirenena Andry Rajoelina, androany sabotsy 22 febroary 2020, nanomboka ny tetikasa vonjy aina hamonjena ny mponina.
Hozaraina rano maimaimpona ny mponina, ary dia hisy kamiao vaovao mpitaona rano hitety ireo Kaominina hizara izany maimaimpona amin’ny mponina mandritra ny efa-bolana ho avy.
Hiatrika lalao fahatelo amin’ny fifaninanam-bondrona ny Barea U20 mandray anjara amin’ny fifaninanana iraisam-pirenena « Coupe Arabe U20 » atao any Arabia Saodita. Hifanandrina amin’i Maroc i Madagasikara rahampitso alahady 23 febroary hariva.
Mila mibata fandresena mazava ny Barea U20 mba hanohizany ny dia amin’ity fifaninanana ity.
Omaly dia tonga tao amin’ny Holiday Inn Riyadh, hotely ipetrahan’ny Barea U20 nanoro hevitra azy ireo i Faneva Ima, kapitenin’ny Barea zoky teo aloha, niaraka tamin’ny vady aman-janany, sady nanolotra fanampiana ara-bola ho an’ireo tanora mandrafitra ny Barea U20.
Mila ravinahitra any Arabia Saodita i Faneva Ima, milalao ao amin’ny Al Faiyah, klioba diviziona voalohany any Arabia Saodita.
Miitatra amin’iny faritra Melaky iny ny fanimbana ala sy hazo sarobidy. Kamiao roa no saron’ny Zandary tamin’ny lalam-pirenena Voalohany Bis (RN1 bis), ny alin’ny 18 febroary 2020, nitondra hazo sarobidy efa voatsofa hanana endrika « madrier ». Ny iray nahitana « madrier » miisa 40, ny faharoa nahitana 41.
Nalaina tao Ihorimbato fokontany, Kaominina Beravina, Distrikan’i Morafenobe ireto hazo ireto.
Nogiazana ao amin’ny toeram-pamonjana fiara avy hatrany moa ireto kamiao ireto, izay vehivavy ao Tsiroanomandidy no voalaza fa tompony. Voararan’ny lalàna ny mitrandraka ireto karazan-kazo tratra ireto. Nanokatra fanadihadiana ny Zandary hamantarana ireo miray tendro amin’izao raharaha izao.
samedi, 22 février 2020 22:22
Nosy Be: Tovolahy vao 16 taona dia efa nanao « kidnapping »
Tovolahy iray vao 16 taona no naka an-keriny zazalahy kely 10 taona tao Belazalaza, Fokontany Dar-Es-Salam Kaominina Djamandjar, Distrikan’i Nosy Be Hell-ville, ny alin'ny 21 febroary 2020. Tsy lasa lavitra anefa izy dia voasambotry ny Fokonolona ary dia avotra ihany koa ilay zazalahy kely, izay voafatotra.
Nentin-katezerana ny Fokonolona nanoloana izay saingy niditra an-tsehatra malaky ny Tobim-paritry ny Zandarimaria ao an-toerana hikarohana ny antony sy handraisana ny fepetra hisorohana ny mety ho fihoaram-pefy na fitsaram-bahoaka.
Tao anaty ora-nikija alina no nirodana tampoka ny tafon'ny « Zaimaika », izay misy toeram-pisakafoanana maromaro.
Efa antitra, ary efa fotoana elaela no tsapan’ny mpivarotra ao ny fahasimbana tamin’ity foto-drafitra fihinanan’ny olona vary mitsangana sy kafe sy mofo ity.
Andro alina no nirodanany. Tsy nisy aina nafoy.
Olona aman’arivony isan’andro no manao tohan’aina ao amin’ity toerana ity. Efa nodiovina moa ny toerana, ary nisy lamina napetraka vonjimaika ho an'ireo mpivarotra.
samedi, 22 février 2020 11:17
Aza diso fahavalo: Tsy rehefa double nationalité dia mpivarotra Tanindrazana
Lasa fahazarana ny miteny hoe sady nationalité Malagasy no Nationalité Française dia lazaina fa mpamadika sy mpivarotra Tanindrazana.
Izaho, araky ny fantatry ny maro, dia tsy niafina fa manana double nationalité, nationalité Malagasy sy nationalité française.
Ny tantara no nahatonga izany, tsy izaho no nanokatra bragety tonga teto Madagasikara. Tonga ny mpanjanan-tany frantsay, nanambady Malagasy ny maro tamin'izy ireo, teraka ny taranaka. Maro amin'ireo Malagasy any avaratra, sy atsimo atsinana no manana nationalité française. Maro tamin'ireo mponin'Antananarivo ihany koa no nahazo izany nationalité française izany, satria tamin'ny 1960 dia afaka nisafidy hanana izany nationalité izany ny maro.